अज्ञात प्रेमिको इमेल - फ्रन्टलाईन नेपाल
के लेखुँ प्रिया तिम्रो लागि ? कुशल छु, कुशलताको काममा गर्छु । तिमीसँग कुरा नभएको ठिक आज चार वर्ष पुगेछ । आजभन्दा चार वर्षअघि आजकै दिन तिमीलाइ इमेल गरेको थिएँ । यो बिचको हाम्रो मौन अवधिलाई मैले तोड्ने हिम्मत गरेको छु आज । तिमीले आफुलाई मबाट सम्पर्कबिहिन भएको मा गर्व गर्यौ होला । तर मैले दुखानुभुती गरें । प्रबिधिको यति सहज जमानामा पनि तिमी यसरी भुमिगत छौ कि लाग्छ, आफू जन्मिएको सालतिर बाँचिरहेको छौ ।
तर मैले तिमी सम्पर्कमा नरहेपछिका केही अनुभव सुनाउन यो इमेल लेखेको छु । आशा छ पढ्ने जाँगर निकाल्नेछौ । तिमीलाई नबिर्सिन र मेरो मानसपटलमा उपस्थित गराउन तिमीले दिएका यादका उपहारले यो बिचमा पुलको काम गरे । बिग्रेको गाडिले एक्कासि सहि मोड लिए जस्तै तिम्रो सामिप्यतामा हराएको म फेरि एक असल छोरो जो बनेको थिएँ । यद्यपी ममा आइरहने फाट्टफुट्ट फेरबदलले मेरो बुवाआमालाइ खासै फरक पर्दैनथ्यो ।
तिमी हिंडिरहेको बाटो चियाउनु, मिस्डकल गरेर इरिटेड बनाउनु, प्रेमिका भेट्न् हतारिएको प्रेमी जस्तै चट्ट बनेर घुम्तिनेरबाट तिमीलाई तर्साउनु, यी मेरा जानि नजानी गर्ने नखरा हुन्थे । तिमी यति अन्जान बनिदिन्थ्यौ नि मैले हजार पटक सामथ्र्य निकालेर गरेका ति प्रस्तुतिहरु क्षण भरमै ब्यर्थ साबित हुन्थे । तिमी बिहान कलेजबाट घर फर्किने समय मलाई एक गरिब किसानलाई मंसिर लागेपछि बाली भित्र्याउने बेला लाग्ने खुसियाली जस्तो चाखलाग्दो हुन्थ्यो । बिस्तारै तिमीलाई दैनिक देख्न भेट्न मन लाग्न थाल्यो ।
म जति नजिक हुन्थें तिमी त्यति टाढिन खोज्थ्यौ । बाटोमै देखेर बस्न लागेको मेरो प्रेम बाटोबाटै रित्तिन लागेको मलाई भान हुँदै थियो । बिस्तारै तिम्रो प्लस टुको क्लास सकिन लागेको थाहा पाउने बित्तिकै म निरास हुन थालें । तिमि बाटोमा देखिन छोड्यौ, तिमीले दिएको फोन नम्बरमा फोन लागेन । तिमी हरायौ । तिम्रो प्रेमको मलाई यस्तो आदत बसेको थियो कि म तिमीलाई नदेखि नहुने भयो । तर , तिमी देखिएनौ कुलतमा फसिरहेको मलाई फेरि प्रेमको नसाले गाँज्न थाल्यो । तिम्रो मप्रतिको बेवास्ताले म बिक्षिप्त हुन पुगें । बिस्तारै मेरो संगत फेरि गलत मानिसहरुसँग हुन थाल्यो । मैले बिचमा पढाई छोडें । मेरो दिनचर्या दिनानुदिन परिवर्तन हुँदै गयो । बेबारिसे लास जस्तै भएँ । केहि समयपछि मैले तिमीलाई बिर्सिएछु । चुरोट, रक्सी हुँदै मेरो एडिक्सन ड्रगसम्म पुग्न थाल्यो । तिमी, परिवार, पढाइ सबै मेरा लागी नौलो हुँदै गए । यस्तो दिनचर्यामा मैले दुई वर्ष फालेको पत्तै भएन । मेरो उपचारका लागि सबै बिधि अपनाइयो । तर, म निको भइनँ । यसमा डाक्टरको काम पनि तिमीले नै गर्यौ । दुई वर्षमा अस्तब्यस्त बनेको मेरो दैनिकी पुन: लयमा फर्कियो ।
तिमी मेरो जीवनमा फेरि एउटा तारा बनेर आयौ । जसले प्रत्येक पटकको झिल्मिलाहटबाट स्वर्गीय आनन्द प्रदान गर्छ । तिमीले दिने हरेक दिनको दुई घण्टा मेरो लागि फाइदाजनक क्याप्सुल साबित भयो । तिमीलाइ देख्दा म त्यसैपनि स्वस्थ्य महसुस गर्थें । उपचार, दवाइ र डाक्टरभन्दा पनि बिरामिलाई हौसला बढाउने आफन्तको भुमिका मैले आफ्नै जीवनबाट थाहा पाएँ ।
तुम्ने सुधाराथा तुम्ने बिगाडा है, तुम्ने किया जो किया
यो गीत खुब सुन्छु म अचेल । हरेक दिन तिमीले सुनाउँने जीवन दर्शन र मोटिभेसनले ममा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै गयो । बिस्तारै म अझैँ उर्जावान बनें । बाआमाले एउटा मात्र सन्तान जो मरिसकेको जस्तो थियो उहि छोरो फिर्ता पाएको महसुस गरे । भिड्भाड, आफन्त इस्टमित्रसँग नझ्याम्मिने, सामाजिक संस्कारको मतलब थिएन मलाई । अर्को अर्थमा भन्दा एन्टिसोसियल थिएँ म । तर, तिमीसँगको संगतले बिस्तारै फरक हुँदै गएँ । आफु, परिवार र नातागोतामा चिनिन थालें । तिमीले मेरो लागि भन्दा नि परिवारको लागि यति ठूलो गुन लगायांै कि तिमीलाई बुहारीको रुपमा अपनाउने रहर लागे पनि तिमीसँग त्यो प्रस्ताव राख्न कहिल्यै सकेनन् मेरा बाआमाले । प्रिया तिमी उनीहरुका लागि धेरै माथी छौ र मेरो लागि त्यो भन्दा पनि माथी ।
तिमी म भन्दा आठ सालपछि जन्मियौ । तर, तिमीभन्दा अठ्चालीस वर्ष बढी बाँचेको मान्छेको जस्तै जीवन दर्शन सिकायौ । तिमीले विश्वास नगर्ने दुई जवान युवा युवतीबिचको प्रेमबाहेक अरु सबै जीवन दर्शन मन पर्छन् मलाई । रिस र ईष्र्या नगर्ने, आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने, दु:खमा नआत्तिने, आफ्नो लक्ष्यप्रती दृढताका साथ लागिरहने । तिमी मेरो लागि एक स्त्री मात्र नभएर जीवन दर्शन पनि हौ प्रिया । प्रिय म भौतिक उपस्थिीति बेगर रमाएको मान्छे जो एकादेशको कथा बाहेक अरु लभ स्टोरिमा सम्भव छैन । र, सान्दर्भिक पनि । तर के गरुँ ? यसबिचको सान्दर्भिकता खोज्न हिंडे भने मैले बनाएको तिमी र म बिचको भर्चुअल संसार गुम्ने जोखिम मोल्नु भन्दा भईरहेकै काल्पनिक संसार उत्तम लाग्छ । तिमीले म निको भएपछि पनि मेरो केयर गरिरह्यौ फोनमा दिनहुँ गफिने तिमी आफ्नो भविष्यबारे कहिल्यै बोलिनौ । तर, म जवरजस्ति तिमीलाइ ममा समाहित गराउने कोसिस गर्थें । तिमी हाम्रो भविष्य सम्भव नहुने कुरा बारम्बार दोहोर्‍र्याइरहन्थ्यौं । हाम्रा निस्कर्ष बिहिन संवादहरु कयौं रात यत्तिकै टुङ्गिन्थे । तथापि निभिसकेको दियोमाथी तेल थप्ने अभ्यास मेरो हुन्थ्यो ।
तिम्रो जन्मदिनको दिनमा हामीबिच निकै लामो कुराकानी भएको म सम्झिरहन्छु । तिमीबिनाको अरुसँगको वैवाहिक सम्बन्ध कल्पना गर्नु त टाढाको कुरो म मेरो अस्तित्व पनि बिर्सनेछु भनिरहँदा तिमी निकै बेर हाँसेकि थियौ । भोलिपल्ट मैले उही वाक्यांश सम्झाइरहें । बिर्सिएको लयमा कुन डाइलग रे ? भनेकि थियौ । त्यति बेलाको मेरो मनोभावना अहिलेसम्म पनि उही छ । मैले तिमीपछि कसैलाई प्रेमिका वा जीवनसाथिका रुपमा पाउने चाहाना पनि गरिनँँ । र, गर्ने छैन पनि । आधा–आधि जीवन बाँचिसकियो । बाँकि जीवन नयाँ पात्र खोज्न र बुझ्नतिर खर्चिनु भन्दा एक्लै रमाउनु बेश । तिमीले मैले के चाहन्छु भन्ने कहिल्यै नबुझेपनि, ममा आएको परिवर्तनको श्रेय तिमिलाइ नै जान्छ प्रिय । शब्दहरुले तिम्रो महानताको वर्णन गर्न कहाँ सक्छन् र ? त्यहि पनि मेरो भावना तिमीसामु पुर्‍र्याउने यि शब्दहरु र माध्यमको रुपमा इमेलले पनि तिमीले जस्तै काम गरेका छन् । डियर यु आर रियल्ली ग्रेट् ।
तीतो त्यसपछि मिठो बनेको मेरो जीवनको अनुभवबाट मैले आफुलाई अलग्याएर अष्ट्रेलिया आएको आज नौ वर्ष बितेछ । थाहा छैन तिमीसँग अब भेट हुन्छ हुँदैन तर, तिमीले सिकाएको सत्यताको पाठलाई मैले सदैव अनुशरण गरें भने मात्रै म एक निस्वार्थ प्रेमी साबित हुनेछु । जसको मुल्यांकनकर्ता केबल म स्वयं हुं । तिमीले मेरा लागि पुर्‍याएको योगदानको म सदैब कदर गर्नेछु ।
उहि तिम्रो अज्ञात प्रेमि ।
विमिस्टेक – चार वटै सुरक्षा निकायका १८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने
८ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०९:४२ August 24, 2018 Binita Siwakoti
भदौ ८,काठमाडौं । भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुन् गइरहेको(विमिस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा सरकारले सुरक्षा ब्यवस्था मजबुद पारेको छ। सम्मेलनस्थल, सम्मेलनमा आउने राष्ट्र प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू बस्ने होटल र उनीहरूको आवजावत हुने क्षेत्रको सुरक्षामा सरकारले देशका ४ वटै सुरक्षा निकायलाई तैनाथ गर्नेछ। सुरक्षामा ५ हजार नेपाल आर्मीसँगै नेपाल प्रहरीका ९ हजार ६ सय […]
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोस्टारिकाद्वारा मानार्थ विद्यावारिधि प्रदान
१६ आश्विन २०७५, मंगलवार ०६:०२ October 2, 2018 Binita Siwakoti
असोज १६, काठमाडौँ । कोष्टारिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोस्टारिकाले मानार्थ विद्यावारिधि प्रदान गरेको छ। युनिभर्सिटी फर पिसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालमा शान्ति स्थापना तथा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरेको हो। योसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले दुईवटा मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेका छन्। गत चैतमा भारतको राजकीय भ्रमणका बेला […]
कपिल शर्मालाई ठूलो झट्का, एक हप्ताभित्रै ‘आउट’ !
२३ बैशाख २०७६, सोमबार ११:३१ May 6, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
काठमाडौं, २३ वैशाख । यो हप्ता टिआरपीको रेसमा भारतीय टिभी कार्यक्रमबीच ठूलै प्रतिस्पर्धा देख्न पाइयो । गत हप्ता कपिल शर्मा टिआरपी सूचीको शीर्ष स्थानमा थिए भने यसपटक उनी शीर्ष पाँचमा पनि रहेनन् । शीर्ष पाँचबाट बाहिरिँदा कपिललाई ठूलै झट्का लागेको छ । यसपटक शीर्ष १ मा टिभी शो ‘कुमकुम भाग्य’ आइपुगेको छ । यस्तो दोस्रो […]
भारतमा लकडाउन खुकुलो
बन्दाबन्दीका कारण रोकिए गौरवका सडक आयोजना